चीन आगो कंबल निर्माण र कारखाना | जीआशुन
फायरप्रूफ ब्लैंकेट श्रृंखला मुख्यतया फायरप्रूफ र गैर दहनशील फाइबरबाट बनेको हुन्छ र विशेष प्रक्रियाद्वारा संसाधित हुन्छ। मुख्य सुविधाहरू: असंगत, उच्च तापमान प्रतिरोधक (5050० ~ ११०० ℃), कॉम्प्याक्ट संरचना, कुनै चिडचिड, नरम र कडा बनावट, असमान सतह वस्तुहरू र उपकरणहरू लपेट्न सजिलो। फायरप्रूफ कम्बलले वस्तुलाई तातो ठाउँ र चिंगारी क्षेत्रबाट जोगाउन सक्छ, र पूर्ण रूपमा दहन रोक्न वा अलग गर्न सक्छ। यसमा उत्कृष्ट विशेषताहरू छन् glass50० ℃ तापमान प्रतिरोध गिलास फाइबर र २0० ℃ तापमान प्रतिरोध सिलिका जेल कोटिंग,
१. सानो वर्ग एको लागि तेल / ग्रीस आगो र फ्लेयर-अपहरू
२. आगोको कोठाबाट भाग्दा वा टुक्रिएको धातुबाट सुरक्षाको लागि अग्नि र इम्बरबाट सुरक्षाको लागि टाउको र शरीरको वरिपरि पनि लपेट्न सकिन्छ 3
Text. बनावट सतह सहित बुना फाइबरग्लास; सबै किनाराहरू फायरप्रूफ थ्रेडको साथ सारिज गरिएको छ
Close. बन्द बुन्नेले आगोलाई पोषण गर्न उपलब्ध वायुमण्डलीय अक्सिजनको मात्रालाई ठूलो मात्रामा कम गर्दछ
An. तत्काल पहुँच कन्टेनरमा प्याकेज गरिएको जुन भित्तामा ह्या be्ग गर्न सकिन्छ वा कुनै पनि पहुँचयोग्य स्थानमा भण्डार गर्न सकिन्छ
Logo. लोगो अनुकूलन गर्न सकिन्छ, र ढुवानी गर्न सकिन्छ
परिवारको भान्साकोठा, बुजुर्गहरूका लागि कोठा, स्कूल छात्रावास, अस्पताल वार्ड, मनोरन्जन स्थल, होटल, उच्च वृद्धि वाणिज्यिक र आवासीय भवनहरू, यी नर्सिंग होम, बाल कल्याण गृहहरू, आवासीय समुदायहरू, कारखाना छात्रावास, शपिंग मल्ल, इन्टरनेट क्याफेहरू, कारहरू, ग्यास स्टेशनहरू, मन्दिरहरू) , जेल र अन्य घना जनसंख्या स्थानहरू।
१ तपाईं ट्रेडिंग कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
हामी २००० देखि निर्माता छौं।
२ के तपाइँ OEM सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
।। के तपाई मलाई नमूना पठाउन सक्नुहुन्छ? यो नि: शुल्क छ?
हो, नमूना नि: शुल्क छ। तर कुरियर चार्ज तपाईको पक्षमा हुनुपर्छ।
।। तपाइँले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको मूल्य, अधिक छुट हुन सक्छ?
यो अर्डर मात्रा मा निर्भर गर्दछ।
।। के त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छ?
सामान्यतया हाम्रो वारेन्टी अवधि छ महिना छ। यदि यो गुणस्तर समस्या हो, हामी एक प्रतिस्थापन, फिर्ती समर्थन गर्दछौं।
। यातायात को मोड
समुद्रबाट, हवाले, कुरियर द्वारा, ट्रेन द्वारा।
।। उत्पादनहरूको गुणस्तर के हो?
ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया देखाउँदछ "गुणवत्ता धेरै राम्रो छ! "
।। डेलिभरी समय कस्तो छ?
अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरे पछि सामान्यतया -30--30० दिन। नमूनाहरू १- days दिन भित्र तयार हुनेछ।
अघिल्लो: फाइबरग्लास वेल्डिंग कम्बल
अर्को: एक्रिलिक लेपित फाइबरग्लास कपडा